VMWare Workstation(Window2012) Presented By Ice-Taungoo — TIIDE
VMWare Workstation(Window2012) Presented By Ice-Taungoo
Mg Kyaw Htut
အခုကျနော်တို့ VMware သုံးပြုပြီးတော့ Microsoft Window Server 2012 ကို VMware မှာတင်ကြည့်ရအောင်ဗျို့။
လုပ်ပုံလုပ်နည်းအသေးစိတ်ကိုတော့ စာနဲ့ပြောပြတာတက် ပုံလေးတွေနဲ့တစ်ဆင့်ခြင်းစီလုပ်ပြပေးထားပါတယ်။
ပုံတွေကတော့နဲနဲတော့ များပါတယ်။ ကျနော် လက်တွေ့လုပ်တုန်း စမ်းထားတဲ့ တစ်ဆင့်ခြင်းစီကို Screen shot လုပ်ပေးထားပါတယ်။
အဆင့် ၁ အနေနဲ့ VMware မှာ Virtual Machine အသစ် ယူပါ။ အောက်မှာ ပုံပြပေးထားပါတယ်။
အဆင့် ၂ အနေနဲ့
1 . Typical(recommended) Custom
2 . Custom(advanced)
ဆိုပြီး ၂ ခုရှိပါတယ်။ အခုတော့ 1 ကိုပဲရွေးထားပြီး Next ကိုနှိပ်ပေးပါ။
အဆင့် ၃ အနေနဲ့
Server6မျိုးထဲမှာမှ Microsoft Windows ကိုပဲရွေးပေးပါနော်။ ပြီးရင်အောက်မှာ OS အမျိုးအစားရွေးပေးရပါမယ်။ အဲအတွက် Drop down ထဲကနေ Window Server 2012 ကိုရွေးပေးပါ။
အဆင့် ၄ အနေနဲ့ ကတော့ Virtual Machine နာမည်ကို ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် ဘယ်နေရာမှာ ထားမလဲအတွက်ကို location ရွေးပေးရပါမယ်။ ကျနော်ကတော့ အကုန်လုံးလုပ်ပြီး Next ပဲဆက်နှိပ်သွားပါတယ်။
အဆင့် ၅ အနေနဲ့ ကျနော်တို့ Machine အတွက် Memory storage ပမာဏရွေးပေးရပါမယ်။ Default အနေနဲ့ 60GB ကိုရွေးပေးထားပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ အဲ Default နဲ့ထားပါတယ်။ ပြီးရင် အောက်မှာလဲ Split Virtual disk ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲရွေးပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ Next ကိုနှိပ်ပြီးဆက်သွားပါမယ်။
အဆင့် ၆ မှာကျနောတို့ ရွေးထားတဲ့ OS ရဲ့ Info ကိုပြထားပါမယ်။ အဲမှာကျနော်တို့ iso file ကိုထည့်ဖို့အတွက် ကို 'Customize Hardware' ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
အဆင့် ၇ အဆင့်အနေနဲ့ ကျနော်တို့ Machine အတွက် RAM size ကိုပြင်လို့ရပါတယ်။ iso ကိုရွေးပေးဖို့အတွက် 'New CD/DVD' ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ Close ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် ၈ အနေနဲ့ ကျနော်တို့ Machine ကို Step up လုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီ အဲအတွက် စက်ကို Power ဖွင့်ဖို့အတွက် Power ကိုဖွင့်ပေးပါ။
အဆင့် ၉ အနေနဲ့ ကျနော် တို့ စက်ဖွင့်လို့ပြီးသွားရင် တော့ ကျနော်တို့ OS တင်ဖို့အတွက်ပဲကျန်ပါတော့ တယ်။အဲအတွက် ကျနော်တို့ Window တင်တာနဲ့အတူတူပါပဲခဗျာ။ အဲလောက်ထိတော့ မပြောပြတော့ပါဘူးနော်။
အဆင့် ၁၀ အနေနဲ့ ကျနော်တို့ OS တင်နေရင်းနဲ့ Serial Key တောင်းပါလိမ့်မယ်။ အဲမှာ Serial Key ထည့်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ keyboard ကနေ Shift+f10 ကို နှိပ်ပါ။
အဲကျရင် cmd ဖွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲနေရာမှာကျနော်တို့ ကိုရေးပြီး Enter ခေါက်ရင် D အောက်ထဲဝင်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲကျရင် ကျနော်တို့ 'cd Crack' လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။ ပြီးရင် 'dir' လို့ခေါ်ပြီး ဘာ File တွေရှိလဲ ကြည့်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် အဲမှာ Product Key.txt ဆိုတာလေးရှိပါလိမ့်မယ်။
အဲမှာ "Product Key.txt" လို့ရိုက်ပြီး Enter ကိုခေါက်ပေးပါ။ ပြီးရင် Notepad ဖွင့်လာရင် Serial Key အမျိုးအစား ၃ ခုရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲမှာ အပေါ်ဆုံးက Standard Server ကိုက Serial key ကို copy ကူးပြီး Serial key တောင်းတဲ့နေရာမှာ paste လုပ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ Next လုပ်ပေးပါ။ အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ပြပေးထားပါတယ်နော်။
Serial Key တောင်းတဲ့ နေရာလေးပါ။
အပေါ်ဆုံးက Serial key ကို copy ကူးပါ။ ပြီးရင် Serial key တောင်းတဲ့နေရာမှာ Paste လုပ်ပေးပါ။
အဆင့် ၁၁ အနေနဲ့ Server အမျိုးအစားရွေးပေးရပါမယ်။ အခုတင်မှာကတော့ GUI နဲ့ပဲ တင်ပါမယ်အဲအတွက် အောက်က GUI ပါတဲ့ စာကြောင်းကိုရွေးပြီး Next ကိုနှိပ်ပေးပါ။
အဆင့် ၁၂ အနေနဲ့ Accept the license terms ကို check လုပ်ပြီး Next ပဲဆက်နှိပ်သွားပေးပါ။
အဆင့် ၁၃ အနေနဲ့
ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ အခုမှစတင်မှာဆိုတော့ Custom ကိုပဲ ရွေးပေးပါ။ Upgrade တော့မလုပ်ပါဘူး။
အဆင့် ၁၄ အနေနဲ့ OS ကို ဘယ် ဘယ်အပိုင်းမှာ ထားမလဲဆိုတာ ရွေးပေးရပါမယ်။ အခုက စမ်းမှာဆိုတော့ အပိုင်းတွေမခွဲတော့ပဲ သူပေးထားတဲ့ နေရာမှာပဲထားပြီး Next ကိုဆက်နှိပ်သွားပါမယ်။
အဆင့် ၁၅ အနေနဲ့ ကျနော်တို့ OS တင်တဲ့ အဆင့်ပြီးဆုံးဖို့ နဲနဲပဲကျန်ပါတော့တယ်။ ဒီအဆင့်မှာ တော့ နဲနဲ ကြာပါမယ် ၁၀ မီနစ် ၁၅ မီနစ် လောက်တော့ကြာပါမယ်။ခနေတော့စောင့်ပေးပါနော်။
အဆင့် ၁၆ မှာတော့ ကျနော်တို့ ခုနက ၁၀ မီနစ်လောက်စောင့်လိုက်တာပြီးသွားပါပြီ။ အခုတော့ OS အတွက် Password ပေးပါ။ Password ပေးထားပြီး မှတ်ထားပါဦးနော်။ အဲ Password နဲ့ ကျနော်တို့ Remote Desktop Connection ကိုစမ်းတဲ့နေရာမှာ ပြန်သုံးရမှာပါ။ ပေးလို့ပြီးသွားရင်တော့ Finish ပဲနှိပ်ပါနော်။
အဆင့် ၁၇ မှာတော့ ကျနော်တို့ Login ဝင်ပြီး သူ့ဟာသူ Auto Server Manager ဖွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။ မဖွင့်ပေးရင်လဲ Task bar မှာ Server Manager ရှိပါတယ်။ အဲကောင်ကို နှိပ်ပြီးဖွင့်လို့ရပါတယ်။
Server Manager ဖွင့်နေပါတယ်။
အဆင့် ၁၈ မှာ Server Manager ဖွင့်သွားရင် Dashboard နဲ့ဖွင့်ပေးထားပါလိမ့်မယ်။ အဲမှာ Local Server ရှိပါတယ်။ အဲကောင်ကို နှိပ်ပေးပါ။
Sever Manager ဖွင့်သွားပါပြီ။
အဆင့် ၁၉ မှာကျနော် ပုံမှာ နံပါတ်စဥ်တပ်ပေးထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ပေးသွားပါ။
1. Static IP ပေးပါမယ်။
2. Time zone ချိန်းပါ။
3. Computer name ချိန်းပါ။
4. Remote Desktop။
Static IP ပေးပုံပေးနည်းတော့ မပြောပြတော့ဘူးနော်။ လုပ်နေကြလို့ထင်တဲ့အတွက် မပြောပြထာပါနော်။
Time zone ကိုတော့ Yangon ကိုချိန်းပေးပါ။
Computer Name က ချိန်းလဲရပါတယ်။ မချိန်းလဲရပါတယ်။ Computer Name ချိန်းလိုက်ရင်တော့ OS က restart ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ ပြန်တက်လာရင် ကျနော်တို့ ပေးလိုက်တဲ့ နာမည်နဲ့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
Remote Desktop ကို Enable လုပ်ပါ။ အခုတော့ Disable ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့ Enable လုပ်ရလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ Computer ကို တခြား Computer နေလှမ်းပြီး သုံးလို့ရအောင်လို့ပါ။
အဲအဆင့်တွေပြီးသွားရင်တော့ ကျနော်တို့ Remote Desktop ကိုစမ်းဖို့ Ready ဖြစ်နေပါပြီး။
နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ တော့ ကျနော်တို့ Computer ကနေ Remote Desktop Connection ဆိုတဲ့ App လေးကိုဖွင့်ပါ။ Computer ဆိုတာက VMware ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ Server ကနေ ဖွင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။
RDC(Remote Desktop Connection) ဖွင့်လာရင် ကျနော်တို့ အပေါ်ဆင့်မှာ VMware မှာတင်ထားတဲ့ Computer ကိုပေးထားတဲ့ Static IP က IPV4 ရဲ့ ip ကို RDC မှာတောင်းနေတဲ့ IP နေရာမှာထည့်ပေးပါ။ ပြီးရင် Connect ကိုနှိပ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ကျနော်တို့ ရဲ့ IP မှန်လို့ချိတ်လို့ရရင် IP က စက်ရဲ့ User Name နဲ့ Password တောင်းပါလိမ့်မယ်။
အဲမှာ User Name မှာ 'Administrator' လို့ထည့်ပြီး password မှာ ကျနော်တို့ အစမှာပေးထားတဲ့ Password ကိုထည့်ပေးပါ။ ပြီးရင် Connect ကိုနှိပ်ပါ။ တစ်ချို့စက်တွေမှာ တစ်ခါတစ်လေ RDC ကိုတန်းမရပါဘူး။ Error တက်ပါတယ်။ အခုကျနော်စမ်းပြတဲ့စက်မှာတော့ တန်းရပါတယ်။ ဘာမှာ Config လုပ်စရာမလိုပါဘူး။
မရတဲ့ စက်တွေမှာ ဘယ်လို Config လုပ်ရမလဲ ကိုယ့်ဟာကို try ကြည့်ပါနော်။ အောက်မှာ ကျနော်တို့ Computer ကနေ VMware ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ Server ကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့ ပုံလေးပြပေးထားပါတယ်။
Success RDC in my computer
Finish Window Server 2012 in VMware
Mg Wai Yan Maing
တခြားအဖွဲ့တွေလည်း လိုက်လုပ်ကြည့်ပြီး ဆွေးနွေးကြပါ။ မေးကြပါ။